किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य सहज रुपमा पाउनुपर्छ : सचिव डा.शर्मा « News24 : Premium News Channel
किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य सहज रुपमा पाउनुपर्छ : सचिव डा.शर्मा
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्द प्रसाद शर्माले किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य सहज रुपमा पाउनुपर्ने बताएका छन् । बुधबार विश्व दूध दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय दूग्ध विकास बोर्डले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सचिव डा. शर्माले किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य सहज रुपमा पाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले त्यसका लागि सहजीकरण गर्न सरकार तयार रहेको बताए । उपभोक्ताहरुले सहज रुपमा स्वच्छ र सफा दूध उपभोग गर्न पाउने अवस्था बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले निर्धक्क भएर दूध उपभोग गर्नसक्ने अवस्था बनाउनका लागि सरोकारवाला सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘किसानहरुले उत्पादन गरेको मूल्य, किसानहरुलाई उत्पादनमा हामीले सहयोग गर्नुपर्छ र सहजीकरण गर्नुपर्छ । र किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य पाउनुपर्छ । उपभोक्ताहरुले दूधको स्वच्छ, सफा उत्पादन सहज तरिकाले सबै उपभोक्ताहरुले उपभोग गर्न सक्ने अवस्थामा पु¥याउन हामीले काम गर्नुपर्छ । किसानले गाउँ–ठाउँमा मूल्य नपाउने, उत्पादन गर्दागर्दै पनि मूल्य नपाउने ।’
उनले थपे, ‘र उपभोक्ताले धेरै ठाउँमा प्रयोगशालाहरुको रिपोर्टले पनि त्यही भन्छ, हामीले क्वालिटी चिज ढुक्क भएर उपभोग गर्न नपाउने स्थिति जुन छ त्यसलाई हामी सबैले मिलेर काम गर्नुपर्छ । र यसमा देखिएका समस्याहरु हामी एकजुट भयौ भने समस्या समाधान गर्न सक्छौँ ।’
उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको बताए ।